एन कुँवर काठमाडाैं, २० मंसिर
हिजोआज हामी हिँड्डुल गर्दा, सुत्दाउठ्दा, जताततै मोबाइलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । मोबाइल हाम्रो जीवनको अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ । भलै मोबाइल ब्याट्रीबाट चल्छ, तर यसले हाम्रो जीवन चलाइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्रोल नै छ, ‘मान्छेसँग तपाईं जतिसुकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुस् तर, उनीहरू आफ्नो मोबाइलको ‘ब्याट्री लो’ हुनुबाहेकका कुनै पनि कुरालाई सिरियस्ली लिँदैनन् ।’
अर्थात्, मानिसहरू मोबाइलको ब्याट्री लो भएपछि चाहिँ जीवन नै रोकिएजस्तो ठान्छन् ।
खासगरी शहरी क्षेत्रका मानिसहरू डिजिटल पेमेन्ट गर्न थालेका छन् र यो काम मोबाइलबाटै हुन्छ ।
काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने ठमेल, दरबारमार्ग, न्यूरोड र यस्तै अन्य शहरका अलि ठूला रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा डिजिटल पेमेन्ट गर्ने चलन बढ्दो छ । देशका अन्य ठूला शहरमा पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्नेहरू देख्न सकिन्छ ।
विकसित मुलुकमा त पान, पराग, चुरोट, मदिराजस्ता सामानका लागि पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्छन् । हामीकहाँ पनि विस्तारै यो प्रणाली प्रभावकारी हुँदैछ ।
यी सबै काम मोबाइलबाटै गर्न सकिने भएकाले हामी मोबाइलको ब्याट्री लो हुन नदिन निकै सजग हुन्छौं ।
हिजोआज एयरपोर्ट, बस स्टेसन, सार्वजनिक शौचालय, सपिङ सेन्टर र अन्य ठाउँमा मोबाइल चार्जिङको सुविधाका लागि यूएसबी पोर्ट लगाइएको देख्न सकिन्छ ।
हुन पनि चार्जर बोक्न झन्झट मान्नेहरूका लागि यो सुनौलो मौका हुन्छ ।
त्यसैले यस्ता यूएसबी पोर्ट देख्नासाथ केही नसोची हामी आफ्नो मोबाइल जोडिहाल्छौं । तर, तपाईंलाई थाहा छ, यस्ता यूएसबी तपाईंको गोपनीयताका लागि कति खतरापूर्ण हुन्छ ?
सार्वजनिक स्थानमा राखिएका यी यूएसबी पोर्टलाई साइबर अपराधीले हाम्रो सबैभन्दा संवेदनशील डाटा चोरी गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । हामीमध्ये धेरैचाहिँ अहिलेसम्म ह्याकरको फेला नपरेको हुन सक्छौं । तर, यस्तो यूएसबी पोर्ट प्रयोग गर्न नरोक्ने हो भने हामी साइबर अपराधीको शिकार हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
सुरक्षाका लागि के गर्ने त ?
हामी कोही पनि चाहँदैनौं कि ह्याकरले हाम्रा निजी डाटा चोरून् । तैपनि, हामीलाई कहिले काहीँ सार्वजनिक स्थलमा राखिएका यूएसबी पोर्टमा मोबाइल चार्ज गर्नु बाध्यता हुन जान्छ । कतैबाट अर्जेन्ट कल आउने वा कसैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै म्याप हेर्नुपर्ने हुन्छ वा डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मोबाइल त अन हुनैपर्‍यो । तर, ह्याकरबाट बच्ने गरी कसरी मोबाइल चार्ज गर्ने त ?
ह्याकरबाट बच्नका लागि अहिले बजारमा ‘यूएसबी डाटा ब्लकर्स’ ल्याइएको छ, जसलाई ‘यूएसबी कण्डम’ नाम दिइएको छ ।
यसले तपाईंको मोबाइलको सुरक्षा गर्दछ, अर्थात् ‘जूस ज्याकिङ’बाट बचाउँछ ।
‘जूस ज्याकिङ’ एक प्रकारको साइबर आक्रमण हो, जसमा सार्वजनिक यूएसबी पोर्टमार्फत तपाईंको मोबाइललाई संक्रमित गरिन्छ । यसमार्फत ह्याकरले तपाईंको मोबाइलमा मालवेयर इन्स्टल गरिदिन्छ जसले तपाईंको गोप्य जानकारी सजिलै ह्याकरसम्म पुर्‍याउँछ ।
गत नोभेम्बर पहिलो साता अमेरिका लस एन्जलस काउन्टी कार्यालयका सहायक ल्यूक सिसकले यसबारे चेतावनी दिएका थिए । उनका अनुसार, यो खालको साइबर आक्रमणको परिणाम ‘विनाशकारी’ हुन सक्छ ।
‘एउटा फ्री ब्याट्री चार्जिङ (सार्वजनिक स्थानमा राखिएका यूएसबी पोर्ट) ले तपाईंको बैंक खाता खाली गरिदिन सक्छ, ह्याकरले मालवेयर इन्स्टल गरेर तपाईंको फोन नै ब्लक गरिदिन सक्छ, घरको ठेगानाजस्ता संवेदनशील जानकारीहरू चोर्न सक्छ,’ ल्युकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
आईबीएमको साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी रिपोर्टका अनुसार, मालवेयरले कम्युटिङ पावरलाई हाइज्याक गर्न सक्छ र तपाईंको मोबाइल ह्याङ हुन थाल्छ ।
रिपोर्टमा संवेदनशील डाटा चोरी हुने खतरा पनि औंल्याइएको छ । साइबरविज्ञले पनि मोबाइल प्रयोगकर्तालाई यूएसबी कण्डमको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यूएसबी कण्डम सानो यूएसबी एडप्टरजस्तै हुन्छ जसमा इनपुट र आउटपुट पोर्ट हुन्छ । यो एडप्टरले मोबाइललाई पावर सप्लाई गर्छ भने डाटा एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा रोकिदिन्छ ।
मूल्य कति पर्छ ?
यूएसबी कण्डम’ अमेरिकी बजारमा १० डलरमा पाइन्छ । यसको आकार सानो हुने भएकाले जता गए पनि बोकेर हिँड्न सकिन्छ । नेपालमा यो १ हजारदेखि १५ सय रूपैयाँसम्ममा अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६, ०३:३०:००
परवेज मुसर्रफ : वीरताकाे पुरस्कारदेखि फाँसीसम्म
एउटा कहालीलाग्दो घटना : मित्रता, विवाह, बलात्कार र जिउँदै जलाइएसम्मको कथा